Phandeeyar STARTUP CHALLENGE 2018 [myanmar]
သင့်မှာ စီးပွားရေး အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပစ္စပ္ပန်နဲ့ အနာဂါတ်ကို တိုးတက်စေမဲ့ နယ်ပယ်သုံးခုဖြစ်တဲ့
အခုလို တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ မိမိတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို သမားရိုးကျနည်းလမ်းနဲ့မဟုတ်ပဲ နည်းပညာရဲ့ အကူအညီသုံးပြီး လုပ်ကိုင်မှသာ ပိုမိုလွယ်ကူအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို နည်းပညာတွေသုံးပြီး ပိုမိုတိုးတက်အောင်မြင်စေချင်တဲ့သူတွေ၊ အသေး နှင့် အလယ်အလတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို တိုးတက်စေချင်တဲ့သူတွေ ကို ရည်ရွယ်တဲ့ track တစ်ခုပါ။
ကမ္ဘာကြီးတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ လယ်ယာစီးပွားရေးလုပ်ငန်း တွေလည်းလိုက်ပြီးတော့ တိုးတက်နေပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးနဲ့အတူ ရင်ဘောင်တန်းလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့လည်း မဖြစ်မနေ လိုအပ်လာပါပြီ။ အဲဒီလို လိုက် ပြီးတော့တိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့က စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင် entrepreneurs တွေနဲ့ startup တွေပေါ်လည်း မူတည်ပါတယ်။ အခု Track က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိက စီးပွားရေးဖြစ်တဲ့ လယ်ယာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ဒီ့တက်ပိုပြီး တိုးတက်အောင်၊ အကျိုးအမြတ်တွေပိုမို ဖြစ်ထွန်းအောင် ၊နည်းစနစ်မှန်မှန်နဲ့ အလေအလွင့်တွေမရှိအောင် ပါဝင်ကူညီပြုလုပ်လိုသူအတွက် အကောင်းဆုံး track တစ်ခုပါ။
အခုဆိုရင် နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွေထဲမှာ နည်းပညာက အဓိကအစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်လာနေသလို အဆင့်မြင့်ပြီး တီထွင်ဆန်းသစ်မှုရှိတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေလည်း ထပ်ပြီးထွက်လာနေဖို့ကလည်း လိုအပ်လာနေပါပြီ။ အခု track က လူသားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လုံခြုံရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ အလုပ်အကိုင်နဲ့ လူနေမှု ဘဝတွေမှ လိုအပ်နေတဲ့ ကဏ္ဍတွေကို နည်းပညာသုံးပြီး ပိုမိုတိုးတက် တီထွင်ဆန်းသစ် စေလိုသူတွေအတွက် အသင့်လျော်ဆုံး track ပါ။
Startup Challenge ကို ဖန်တီးရာ (အမှတ် ၆၂၈- ၆၃၆ ကုန်သည်လမ်း၊ ၂၉ လမ်းနှင့် လမ်း ၃၀ ကြား၊ (Royal Riverview Condo ၁၀ ထပ်) မှာ ဇွန်လ ၁၆ ကနေ ၂၄ နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာပါ။
ဖန်တီးရာမှာ နယ်ပယ်အလိုက် ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာရှင်များကနေ ပြိုင်ပွဲမစခင်နဲ့ ပြိုင်ပွဲကာလအတွင်း လာရောက်ပြီး အနီးကပ် သင်ကြားပြသပေးမှာဖြစ်လို့ ပါဝင်ဆင်နွဲသူများအနေနဲ့ ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့ နယ်ပယ်မှာ အတွေ့အကြုံရှိဖိုမလိုပါ။ ဒါ့အပြင့် နိုင်ငံတကာမှာ စီးပွားရေးတည်ဆောက်ရာမှာ အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ Business Model Canvas, Lean Methodology အစရှိတဲ့ tools တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက လာရောက် သင်ကြားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပါဝင်ဆင်နွဲဖို့ SC – Apply Now မှာလျောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
Startup Challenge အကြောင်းကို ပိုမို လေ့လာလိုပါက အောက်ပါ ideation bootcamp ကို တက်ရောက်ပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
Startup Challenge : Weekly Ideation Bootcamp (Thursday: 14 June 2018 @6 pm to 8 pm)
ဒီမှာ စာရင်းပေးသွင်းပါ။If you have any question regarding the Startup Challenge 2018, kindly find below for Frequently Asked Questions or contact Phandeeyar at 09 966 313 504 or email us at startupchallenge@phandeeyar.org.
အဖြေ – SC – Apply Now မှာ ဝင်ရောက်လျောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
အဖြေ – ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့ မတိုင်မှီလျောက်ထားရမှာပါ။
မေးခွန်း – Startup Challenge 2018 ကိုဘယ်မှာ ကျင်းပမှာပါလဲ?
အဖြေ – Startup Challenge 2018 ကို ဖန်တီးရာ (အမှတ် ၆၂၈- ၆၃၆ ကုန်သည်လမ်း၊ ၂၉ လမ်းနှင့် လမ်း ၃၀ ကြား၊ (Royal Riverview Condo ၁၀ ထပ်) မှာ ကျင်းပမှာပါ။
အဖြေ – Startup Challenge ဟာ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့ကနေ ၂၉ ရက်နေ့ထိ ဖန်တီးရာမှာ ကျင်းပမှာပါ။
အဖြေ – Tech for Company, Tech for Life, Tech for Farm နဲ့ Tech for Cityအစရှိတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာ စီးပွားရေးထူထောင်လိုသူ မည်သူမဆို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်။
အဖြေ – Phandeeyar ကကျင်းပတဲ့ Startup Challenge Ideation Bootcamp သို့လာရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အပါတ် စဉ် ကြာသာပတေးနေ့ ညနေ (၆) နာရီ မှာကျင်းပမှာပါ။ အထက်မှာ စာရင်းပေးသွင်းနို်င်ပါတယ်။
Tech for City
အဖြေ – အနည်းဆုံး ၂ ယောက်ကနေ စတင်ပြီး ပါဝင်လို့ရပါပြီး။ ၃ ယောက်ထပ်ကျော် ခွင့်မရှိပါဘူး။
အဖြေ – ရပါတယ် ။ လိုအပ်တဲ့ သတင်း အချက်အလက်တွေကို ကျွန်တော်တို့ online ကနေ ကြေညာသွားမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် ဇူလိုင် လ နောက်ဆုံးနေ့မှာ မိတ်ဆွေတို့ အဖွဲ့က တစ်ယောက်တော့ ရန်ကုန်ကို လာပြီး အကဲဖြတ်ဒိုင်တွေကို လာရောက် တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဖြေ – ရပါတယ် ။ ဖန်တီးရာက တစ်ပတ်လုံး ဖွင့်ထားမှာပါ။ လာရောက်လို့ရပါတယ်။